(Xog Xasaasi ah);-Maxaadan Ogeyn oo Ku Rarnaa Markabkii Ku Gubtey Xeebta Caluula Ee Puntland… | AllJubbalandnews
(Xog Xasaasi ah);-Maxaadan Ogeyn oo Ku Rarnaa Markabkii Ku Gubtey Xeebta Caluula Ee Puntland…
Published on June 30, 2017 by admin · No Comments
MUQDISHO;-Markab weyn oo nooca xamuulka qaada ah ayaa todobaadka maanta dhamaanaya ku qarxay deegaano kamid ah xeebaha Puntland, gaar ahaana gobalka Gardafuu meel aan ka fogeyn magaalada Caluula ee gobalkaas.
Markii ugu horeysay dadka deegaanka ayaa sheegay in waxa dhacay uu ahaa qarax weyn oo ka dhashay markab kuwa dagaalka ah oo kusugnaa goobtaas, laakiin dadaalo badan oo la sameeyey ugu dambeyntii Badweyn.com ayaa xaqiiqada soo ogaatay.
Warsidaha Badweyn.com ayaa ogaaday in Markabkan uu waday shidaal, uuna dab ku qabsaday gudaha Badweynta, oo uu gurmaday dalbaday, laakiin uu waayay cid usoo gurmata.
Wadaha Markabka ayaa go’aansaday in markabkan uu keeno xeebaha si uu u yareeyo dhibaatada uu badda gunteeda ku geysan karro & Shaqaalaha saaranba.
Ma jiraan xog ka soo baxday oo ka hadli karta dalka laga lahaa Markabkan & Khasaaraha nafeed ee uu geystay burburkiisu, laakiin guud ahaan markabkan ayaa dagay oo dhulka galay.
Maamulka Puntland ayaa hadda guddi u saartay sidii daraasad loogu sameyn lahaa halka uu ku dagay iyo Shidaalka ama saliidda uu sidda ay deegaanka saameyn ugu yeelan karto.
Shaki ma saarna in ay ka dhalan doonaan khasaare kala duwan oo ay ugu horeyso deegaankas, laakiin dadaalo dheeraad ah ayaa lagu jiraa oo ah in meesha uu ku daga la qiimeyo, ka dibna loo sameeyo sidda ugu macquulsan ee looga leexan karro goobahaas.